Isiko Namagugu - Ama-Ellicott Dredges
Senza ama-dredges ukwakha umhlaba ongcono. Sakha futhi senze imishini ebalulekile ukuvikela imvelo, ukwenza ngcono nokugcina imigwaqo iphephile, nokumba izinsizakusebenza ezingaphansi kwamanzi ukuze kuthuthukiswe umnotho.
Sakha inhlangano esiziqhenyayo ngokuba yingxenye yayo, lapho sikhula khona, siphumelela, futhi sinakekela inhlalakahle yomunye nomunye. Sithobekile empumelelweni yethu futhi sihlala sisebenzela ukuthuthuka. Ngaphezulu kwempahla ebonakalayo noma impahla ebhaliwe, inkampani iyinhlanganisela eguqukayo njalo kithi sonke. Ngokulandelayo, wonke umuntu ubamba iqhaza ekwakheni nasekwakheni inkampani yethu. Siyaqonda ukuthi ibhizinisi likwakha kanjani ukubaluleka emhlabeni, futhi siyaqonda ukuthi iqhaza lethu ngabanye linikela kanjani ekuzuzeni okukhulu.
Sikholwa ukuthi inzuzo akuyona umdlalo wokugcina okufanele ubekwe eqhulwini ngaphezu kwakho konke okunye. Futhi qaphela ukuthi sifuna ukukhulisa inzuzo yethu ukuze sitshale esikhathini esizayo ukuze sisebenzele abasebenzi bethu, amakhasimende ethu, kanye nemiphakathi yethu.
Izinkolelo Zesisekelo Nezindinganiso Zokuqondisa
Ukuzibophezela kwenkampani kumakhasimende
Ubunceku - ukwenza ngokuzibophezela ngentshisekelo yenkampani
Passionate ngomsebenzi wethu
Ukwenza izinqumo okusekelwe eqinisweni